That's so good, right?: April Drama
"ငါတို့လာတဲ့ နှစ်ရက်အတွင်း ဒီနေ့မနက်ဘဲ ရာသီဥတုက နွေးတာနော်" ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကိုယ့်ဖာသာပြောသလိုမျိုးခပ်တိုး တိုးပြောမိပါတယ်။ သစ်တောအုပ်ကြီးရဲ့ လမ်းသွယ်လေးထဲ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှင့် အတူ လျှောက်လာတဲ့အချိန်လေး မှာပေါ့နော်။
"ရေတွေ နွေးနေပါစေဆုတောင်းရမှာပဲကွ" မင်းမင်းကပြန်ပြောတယ်။ ခေါင်းပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ စိမ်းမြမြသစ်ပင်ကြီးရဲ့ ထိပ်ဖျားဟာ တမျှော်တခေါ်ကြီး ကြယ်တွေကို ထိနမ်းနေသလားပဲ။
တဝေါဝေါကျနေတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးဆီက ရေတွေ စီးကျနေသံကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ ပိုမြန်လာသလို ခံစားရကာ ပျော်ရွှင်စိတ်ကလည်း ကခုန်မြူးတူးလာမိပါပြီ။ ညအချိန်မှာ ရေကူးရခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးနွေရာသီ အပန်းဖြေနည်းတစ်ခုဖြစ်လာနေပြီဆိုရမှာပေါ့လေ။
"ငါ့ကောင်တွေ တခြားဘက်ကို သိပ်မသွားနဲ့နော်" ကျွန်တော်ရေပြင်ကို ခြေထောက်လေးနှင့် အသာစမ်းသပ်၊ အပေါ်က ဘောင်းဘီတို ကော၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုရော ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ရေက သက်သောင့်သက်သာကူးလို့ရတဲ့ အနွေးဓာတ်ရှိနေတော့ ကျွန်တော် သည် အဦးဆုံးရေကူးသမားဖြစ်ခဲ့သပေါ့။ ညလေးဟာတော်တော်လှတဲ့ ညတစ်ညပါပဲဗျာ။ လပြည့်ညဖြစ်တာကြောင့် လမင်းကြီးဟာ ပြည့်ပြည့်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ ကောင်းကင်ထက်မှာ ချိတ်ဆွဲနေသလို လေထုဟာလည်း ခပ်နွေးနွေး တိုတ်ခတ်နေရဲ့။ အ၀တ်မပါတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အရေပြားနဲ့ ရေနွေးနွေးထိနေရတာ အကောင်းဆုံး ခံစားမှုပါပဲ။ ကျွန်တော် ရေအသာကူးသွားရင်း တစ်ဖက်ကမ်းစပ်က သဲပြင်ကိုခြေ ထောက်မိပြန်တော့ နေ့အချိန်က ပူခဲ့တဲ့နေရှိန်ကြောင့် သဲပြင်အပူရှိန်လေးက မဆိုးရွားပါဘူး။
မြတ်သူက အ၀တ်မပါဘဲ ရေထဲဆင်းကူးတာနောက်ဆုံးဖြစ်သလို ကျွန်တော့်ဘေးကိုရောက်လာတော့လဲ မောမောနှင့် အသက်ရှူနေ လေရဲ့။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် တစ်ယောက် အသက်ရှူသံတစ်ယောက်ကြားရတဲ့ အနေအထားနဲ့ သဲပြင်ပေါ်လှဲလျောင်းကြရင်း ကောင်းကင်ပေါ်က ကြယ်တွေကို ရေတွက်ကြပါတယ်။
"ငါတို့မြစ်ရဲ့အလယ်နားက ကျောက်ဆောင်ကြီးဆီ ကူးသွားရအောင်လေ၊ နေပူခဲ့ရင်တော့ နွေးနေဦးမှာကွ" မြတ်သူက အကြံပေးတယ် ရုတ်တရက်။
ကျွန်တော် အဦးဆုံးမတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ သူ့တောင်းဆိုချက်ကို သဘောတူလိုက်တယ်။ မြတ်သူနှင့် မင်းမင်း ဘေးချင်းယှဉ်လျှောက်ကာ ကျွန်တော့်နောက်က လိုက်လာကြတယ်ဗျ။
"ငါ့ကောင် မင်းတင်ပါးကြီး ရေထဲပေါလောပေါ်နေတယ်နော့" မင်းမင်းက အမှောင်ရိပ်သန်းနေတဲ့အချိန် ရေထဲကူးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားတွေကို သုံးသပ်မိတယ်ထင်ပါရဲ့။
"ရေပေါ် ပေါ်မနေအောင်တော့ ကြိုးစားကူးတာပဲလေကွာ ပေါ်နေတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူး" ကျွန်တော်လည်း ရှက်ရှက်နှင့် ပြန်ပြောလိုက် ရတာပေါ့နော်။
ကျွန်တော်တို့ ကျောက်ဆောင်ကြီးရှိရာဆီ ဘေးချင်းယှဉ် ကူးသွားကြတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ခပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အ၀တ်မပါရေကူးကြခြင်းလေ။ မင်းမင်းနှင့် မြတ်သူတို့ ကျောက်ဆောင်ကြီးပေါ် အရင်တွယ်တက်လိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ လှဲလျောင်း အမောဖြေရင်း ကျောက်ဆောင်ရဲ့ အပူငွေ့ကို သဘောကျနေကြတာတော့အမှန်။
"Felling တော်တော် good နော်၊ ဒါကြီးက ပူနွေးနေတုန်းပဲကွ" မင်းမင်းက စကားစပြောတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကျောက်ဆောင်ပေါ် တွယ်တက်လိုက်ကာ သူတို့လှဲလျောင်းတဲ့ ပုံစံအတိုင်းလှဲကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ပူနွေးနေတဲ့ ကျောက်ဆောင်ပေါ် မှောက်ထားတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မတ်လာရတာပေါ့နော်။ တကယ့်ကိုမိုက်တယ်။ မင်းမင်းနှင့် မြတ်သူ ပက်လက်လှန်လှဲလျောင်းလိုက် တော့ သူတို့ငပဲတွေဟာလည်း မတ်မတ်ထောင်နေတာကို ကြယ်ရောင်အလင်းနှင့် မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ရင်းနှီးနေလို့လားမသိ ရှက်စိတ် မဖြစ်ပေါ်မိကြတော့ပါဘူး။
"ကျောက်ဆောင်က နွေးနေတော့ မင်းတို့ -ီးတွေကိုလည်း သူ့လိုမာအောင် လုပ်တယ်ထင်ရဲ့" ကျွန်တော်က လှမ်းစလိုက်တယ်။
"ဟုတ်တယ်၊ မင်းလဲ -ီးတောင်နေပြီဆိုတာ ငါလောင်းရဲတယ်ကွာ" မြတ်သူက စကားခွန်းတုန့်ပြန်တယ်။
ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ထန်နေပြီပဲ။
"ငါတော့ ရေထဲပြန်ဆင်းစိမ်ပြီး အေးအောင်လုပ်မှထင်တယ်" ကျွန်တော်ရေထဲ လျောဆင်းရင်း အရှက်ပြေလုပ်သလိုလိုဟန်ဆောင်လိုက် တယ်ပေါ့နော်။ ရေထဲဆင်းသာဆင်းလိုက်ရတာ ငပဲက ခေါင်းမငြိမ်ချင်သေးဘူး ခေါင်းထောင်တုန်းဆိုတော့ ရေထဲမမြှုပ်အောင်သာ ခြေထောက်ကို လှုတ်ခပ်နေရတယ်။
ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်နောက်ဖက်ကနေ ခုန်ဆင်းသံနှင့်အတူ ရေထဲကိုဆွဲမြှုပ်ခံရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို တိုက်ခိုက်သူ မင်းမင်းအား ပခုံး ပေါ်ကနေဆွဲကိုင်ပြီး သူ့ကိုပြန်လည်လုံးထွေးလိုက်ပါရဲ့။ မင်းမင်းတစ်ယောက် သက်လုံမကောင်းစွာ ဟောဟဲဖြစ်နေပြီးသကာလ ရေ မျက်နှာပြင်ပေါ် ကျွန်တော့်နောက်ကပေါ်လာတယ်လေ။ မြတ်သူကလည်း ရေထဲ ခုန်ဆင်းလာကာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား လုံးထွေး ပွဲကို ပူးပေါင်းလိုက်တယ်ဗျ။ တစ်ကြိမ်တော့ မြတ်သူကနောက်ဘက်ကနေသိုင်းဖက်ပြီး ချုပ်တာမှာ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို တစ်ခုခုက ဖိ ထောက်နေသလို ခံစားရသား။ အား....သူ့ငပဲမာမာက ဟိုထိုးသည်တိုးနှင့် ကျွန်တော့်အောက်ပိုင်းနေရာအနှံ့ကိုလေ။ ကျွန်တော့်ခြေ ထောက်တွေကို လှုပ်ရမ်းနေရတာကြောင့် တင်ပါးတွေနှင့် သူ့ကိုပြန်ပွတ်သပ်နေသလို ဖြစ်နေတာဆိုတော့ သူနှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်လို့ ရအောင်လှည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ပေါင်တစ်ချောင်းကိုဆွဲကာ ဟန်ချက်ပျက်အောင်လုပ်လိုက်တာ ခပ်မာမာ သူ့ငပဲက ကျွန်တော့် ပခုံးသားတွေကို တို့ခတ်ပါရော။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲသည်လည်း ပြန်မာတောင့်လာရကာ မင်းမင်းကော ဘယ်လိုများရှိမယ်ဆိုပြီး သူ့ နောက်ဖက်ကနေ ကျွန်တော်သိုင်းဖက်ကာပြန်လုံးထွေးမိလိုက်ပြန်သေးတာပါပဲ။
"အိုကေ ငါတော်ပြီကွာ" ကျွန်တော်ကစားပွဲကိုရပ်လိုက်ပြီး ကျောက်ဆောင်ပေါ်ဆွဲတက်လိုက်ပါတယ်။ မင်းမင်းနှင့် မြတ်သူလည်း ကျွန်တော့်နည်းတူပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ မတ်ပြီးထောင်နေတာများ ချက်ကိုလမ်းညွှန်နေသလားထင်ရတယ်။ မင်းမင်းနှင့် မြတ်သူ သည်လည်း အလားတူ ပြဿနာရင်ဆိုင်ရတယ်ထင်ပါရဲ့ မျက်နှာတွေက တစ်မျိုးတစ်မည်။
"ငါတော့ တစ်လျော့လောက်ထုတ်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကွာ" ကျွန်တော်ပြောလည်းပြော ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ကာ စတင်လှုပ်ရှား လက်ကစား လိုက်ပါတယ်။
"ငါလည်း အတူတူပဲ" မင်းမင်းက သဘောညီတယ်။
မြတ်သူက ဘာစကားမှ မပြောဘဲ သူ့ငပဲကိုသူကိုင်ကစားနေတာလေ အဟိ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပူနွေးတဲ့ ကျောက်ဆောင်ပေါ်လှဲလျောင်း ကြယ်တွေဆီ မျက်နှာမူကာ ကိုယ့်ငပဲနှင့်ကိုယ်အလုပ်များနေကြတယ်ပေါ့နော် ပြောရရင်တော့။
"ငါရေထဲ ပြန်ဆင်းဦးမယ်ကွာ...အဲ့ဖီလင်ကမိုက်တယ်။ ဘယ်သူလိုက်မလဲ"
ကျွန်တော် တစ်ဆင့်နိမ့်ကျောက်ဆောင်ဘေးက ခြေနဲ့ထောက်မိတဲ့သဲပြင်ပေါ် လျောဆင်းလိုက်တယ် ကိုယ်တစ်ပိုင်းကိုတော့ ကျောက် ဆောင်လေးပေါ် အပေါ်ပိုင်းမှေးတင်ထားရင်းပေါ့။ မင်းမင်းလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ အောက်ပိုင်းရေလိုက်စိမ်တယ်ဗျ။
"ဒီဖီလင်က အရမ်းကောင်း...အာ" ကျွန်တော်ရေထဲမှာ လက်ကစားနေရင်းပြောမိတယ်။ မင်းမင်းရဲ့တုန့်ပြန်စကားသံက "အာ...အ..ရှီး" တဲ့ ကျွန်တော်နှင့် လက်မအနည်းငယ်သာကွာတဲ့ နေရာမှာ -ွင်းထုရင်းပေါ့။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား ရေထဲမှာ ကောင်းနေကြသလို မြတ်သူက ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ကျောက်ဆောင်လေးရဲ့ အနောက်ဘက်က ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း လှဲ လျောင်းရင်း အလုပ်များနေပါတယ်။ မင်းမင်း ကျွန်တော့်အနား တိုးကပ်လာရင်းကြိုတင် သတိပေးခြင်းမပြုဘဲ ကလိထိုးကာ ရေထဲ ပြုတ်ကျအောင် သူလုပ်တယ်။ ကျွန်တော် လက်ကိုခိုင်ခိုင်ထား တွယ်ကပ်ထားလိုက်တာကြောင့် နောက်ဆုံး သူ ကျွန်တော့်အထက်နားက ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဝေးကိုတော့ မရွေ့နိုင်ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က သူ့ငပဲကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တာကြောင့်ပေါ့။
ကျွန်တော်ကလည်း ယောင်ယမ်းဆွဲကိုင်မိသလို သူကလည်း ယောင်ယမ်းပြီးနောက်ကို နည်းနည်းဆုတ်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ခပ် နိမ့်နိမ့်ကျောက်ဆောင်ပေါ် တစောင်းလှဲထိုင်လိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲခပ်တုတ်တုတ်ကို နည်းနည်းညှစ်ပြုလိုက်ပြီး ခဏကြာတော့ လက်ကစားပေးမိရော။ သူကလည်း ရေစပ်မှာ ရပ်နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲရှိရာကို လက်လှမ်းပြီး ပြန်လည်ပွတ်သပ်ကစားပေးပါတယ်။ မင်းမင်းနှင့် ကျွန်တော် စကားဆက်မဆိုမိကြပါဘူး နှစ်ဦးသား လက်ကစားနေကြရင်း နှုတ်ဖျားကခပ် တိုးတိုး ညည်းညူနေတာကလွဲ လို့လေ။
"မင်းတို့နှစ်ယောက်ဘာလုပ်နေကြတာလဲ" မြတ်သူတစ်ယောက် လှမ်းမေးလိုက်သံက အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းလိုမျိုး ခပ်လေးလေး။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားက ပူးကပ်နေသလိုဖြစ်နေတာကိုမြင်မိတာကြောင့် သူလှမ်းမေးလိုက်ဟန်တူပါတယ်။
"ဟေ့..တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် -ုပေးနေကြတာလား"
"ဟုတ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ မနာလိုနေတာလား" ကျွန်တော် မင်းမင်းငပဲကို မလွတ်တမ်းဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ "ဒီကို လာခဲ့လေ မြတ်သူ ငါတို့သုံးယောက်ထိုင်လို့ရပါတယ် ကျောက်ဆောင်က" မင်းမင်းကလည်း စကားပြန်လုပ်တယ်။
မြတ်သူ သူလှဲနေတဲ့ ကျောက်ဆောင်ပေါ်ကနေ ဆင်းလာပြီး ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ တစ်ဆင့်နိမ့်ကျောက်ဆောင်လေးဆီ လှမ်းလာတယ်။ ရေထဲရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို တင်ပါးတွေကနေပင့်ကိုင်ပြီး မင်းမင်းရှိနေတဲ့ကျောက်ဆောင်ပေါ်ကိုတက်စေသလို သူလည်း နောက်က တက်လာတယ်။ ပြီးတော့ မင်းမင်းငပဲကို ဆက်ကိုင်ပြီး မလွတ်တမ်း-ု ပေးမိနေတဲ့ ကျွန်တော့်အနားထက် မင်းမင်းအနားကိုကပ်သွား ဟန်က မင်းမင်းလက်ကစားပေးတာကို ခံစားချင်လို့ထင်တာပဲ။
သုံးဦးသား စက်ဝန်းတစ်ခုလို ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ မြတ်သူရဲ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ရောက်လာပြန်တော့ နုညံ့တဲ့လက် ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု ပိုဖြစ်ရပြန်ရော။ သုံးယောက်သား ၁၅မိနစ်လောက် ကိုယ်စီအပြန်အလှန် လက်ကစားပေးမိကြပြီးနောက် မင်းမင်း က မြတ်သူ့ငပဲကိုလွှတ် ကျွန်တော့်ဆီကို တိုးကပ်လာတယ်ဗျ။ မင်းမင်းမျက်ဝန်းတွေက ထူးဆန်းတယ်လို့ ခံစားမိရတဲ့ခဏမှာပဲ မင်းမင်း ဦးခေါင်းက ကျွန်တော့်ငပဲရှိရာကို ငုံ့ကိုင်းပြီးနောက် blow me!
"အိုး...shit!.မင်းမင်း...အင်း... "ကျွန်တော်ကြုံဖူး ရမိခံစားဖူးတဲ့ blowjob တွေထဲက အကောင်းဆုံးအပြုအစုပဲလို့ရရှိခံစားမိပါတယ်။ မြတ်သူက မင်းမင်းပေါင်ခြံရှိရာကို ခေါင်းငုံ့ပြီးသကာလ သူလည်း တလှုပ်လှုပ်။ မင်းမင်းက ကျွန်တော့်ရဲ့အစွမ်းကုန်မာတောင်နေတဲ့ငပဲကို သူ့ ပါးစပ်ကချွတ်လိုက်ပြီး မြတ်သူ့ကိုမျှဝေလိုက်တယ်။
"Mmmhuhh....ohh...မြတ်သူ" မင်းမင်း blowjob လုပ်တာထက် တစ်မျိုးထူးတဲ့ မြတ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကလည်း ပိုမိုစွမ်းပါတယ်။ မင်းမင်းက ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်က ချွတ်တာနှင့် တပြိုင်နက် ခပ်ရှည်ရှည် မြတ်သူ့ငပဲကို သူ့အာခံတွင်းထဲ အဆုံးထိထည့်နိုင် အောင်ကြိုးစားသား။ ခဏကြာတော့ ကျောက်ဆောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှောက်လျက်အနေအထားဖြစ်နေဆဲ မင်းမင်းအောက်ပိုင်းရှိရာဆီ မြတ်သူ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ရွှေ့သွားတယ်။ ပြီးတော့ မင်းမင်းတင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အသာဟကာ လျှာကျွေးပါရော။ မင်းမင်း ခါးတစ်ချက် ကော့ကာ အော်ညည်းတာ သိပ်မကြာဘဲ ကျွန်တော့်ငပဲ တရမ်းရမ်းကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ဆွဲငုံပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ခဏ တာမှေးမှိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့် လိုက်ချိန်မှာတော့ မင်းမင်းတစ်ယောက် ကျောကော့နေသလို မြတ်သူမှာလည်း လှေကြီးထိုးနည်းနဲ့ တပြုန်းပြုန်း လှုပ်ရှားနေပါပြီ။ ဟုတ်တယ် မြတ်သူ....မင်းမင်းကို တရစပ် -ိုးနေပြီလေ။
"အို...အို....အို...shit!!.အား...." မင်းမင်း နှုတ်ဖျားက တရစပ်အော်ညည်းနေသလို မြတ်သူကလည်း ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ချက်တွေနှင့် လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ မင်းမင်းစိတ်တွေထန် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပါးစပ်ထဲပြန်သွင်းကာ တပြွတ်ပြွတ် စုပ်မျိုရော။ အား...ဘယ်လောက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်း ရင်ခုန်သံရပ်စေမယ့် အချိန်အခါမျိုးလဲဆိုတာ ပြောပြလို့မရဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
"အင်း...အင်း....အ...ရှီး...ငါ...ငါ....ပြီးတော့မယ်" မြတ်သူ သူ့ခါးကို စက်သေနတ်ဆွဲသလိုပစ်နေရင်းမှ နှုတ်ဖျားက မွတ်သိပ်နေတဲ့ လေ သံမျိုးနှင့်ပြောပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် မြတ်သူ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေနှေးကွေးပြီး ရပ်ဆိုင်းသွားတော့ "ငါ့အလှည့်ကွာ" ကျွန်တော်အဲလို ပြောပြီး မင်းမင်းနောက်ပိုင်းကိုရွေ့လိုက်တယ်။ မင်းမင်းကို doggy style နေခိုင်းလိုက်ပြီးနောက် ခါရမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို တဖြည်း ဖြည်းချင်း တွင်းအောင်းခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်။
"အိုး...မိုက်တယ်...ညှစ်ပေးတာကောင်း....အ" မင်းမင်းခရေကြွက်သားတွေက အထုတ်အသွင်းလုပ်နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဖျစ်ညှစ်မှု ပြုလုပ်ပေးတာကြောင့် ပိုမိုစိတ်ကြွရပါတယ်။ ဒီလိုဆို အမြန်ပြီးသွားနိုင်တာကြောင့် အသာလေးဖွ ပြန်ပြီးငပဲကို ဆွဲထုတ်ကာ သူ့ကို ပက် လက် လှဲခိုင်းလိုက်မိရဲ့။ သူ့ခြေနှစ်ချောင်းကို ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်တင် ခပ်ဟဟဖြစ်သွားတဲ့ ခရေ၀ထဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို တဆုံးဖိ ထည့် လိုက်ပါ တယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ဖိဖိထည့်လိုက်တိုင်း သူ့ငပဲကလည်း twist ဖြစ်ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကျွန်တော့်လက်နှင့်အသာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း တပြိုင်တည်းလို လက်ကစားပေးဖြစ်သည်ပေါ့။
"ငါပြောတဲ့အချိန် မင်းလည်းပြီးအောင်လုပ်နော်" ကျွန်တော်သူ့နားရွက်နား တိုးကပ်ပြောလိုက်သေးတယ်။
ကျွန်တော့်ငပဲထဲ တဆစ်ဆစ်နှင့် ပြီးချင်သလိုလိုဖြစ်လာတာကြောင့် ခပ်မြန်မြန်လေးဆောင့် -ိုးရင်း မင်းမင်းနားရွက်နား နှုတ်ခမ်းသား တွေနှင့် ပွတ်သပ်ရင်း "ohh...Ohhh....Ohhho...hoohh...huhu....uhh...အာ...ငါပြီးပြီ...အ" လို့ညည်းညူရင်းမှာ သူ့ငပဲကိုလည်း ခပ်သွက်သွက် စည်းချက်ညီ မွတ်သိပ်စွာ ကစားပေးလိုက်ပါတယ်။
"အိုး.....Fuck...အား..အား"မင်းမင်းနှင့် ကျွန်တော် တပြိုင်တည်းလို အော်ညည်းမိတာက ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေ ပူနွေးရွှဲစိုသွားချိန်နှင့် မင်းမင်း ခရေ၀ထဲအဆုံးထိငပဲကိုကော့သွင်းလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုတွေ တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်ကိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်သား ကျောက်ဆောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ စကားမပြောဘဲ အတန်ကြာလှဲလျောင်းငြိမ်သက်နေမိကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်သာယာလိုက်တဲ့ အချိန်အခါပါလိမ့်နော်။
ကျွန်တော်တို့ ကားရှိရာကို ပြန်လာတဲ့ လမ်းတလျှောက် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မသိုးမသန့်ဖြစ်လာတယ်ဗျ။ လေထုတဲက သတိပေးချက် တွေလွှင့်နေတဲ့ အသံတွေကို ကြားနေရသလိုပဲ။ ပြီးတော့ သွေးညှီနံ့လိုလို။
ဟော..ခပ်လှမ်းလှမ်းတောစပ်က ဘာသံများလဲ? ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း ကြည့်မိလိုက်တော့ သူတို့လည်းအလားတူ သံသယမကင်း ဖြစ်နေကြဟန် မျက်လုံးများက ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းပါ။
ကားဆီအရောက် ကားတံခါးကို ဆွဲအဖွင့် ကားခေါင်မိုးပေါ်က ဘာ...
Alex Aung (2 Oct 2012)
Posted by Alex Aung at 9:56 PM
ကိုကြီးပြောမယ် ညီလေးနားထောင် (အပိုင်း သုံး)
Help (Part IV)
ကျား-လိင်အင်္ဂါ သန်မာစေတဲ့ဆေးများ (၂)
ကိုကြီးပြောမယ် ညီလေးနားထောင် (အပိုင်း နှစ်)
အချစ်က ပိုစွန့်စားရတယ်လို့ ခံယူထားသူတို့ရဲ့မျှော်လ...
ကျွန်တော် သူ့ ကို ချစ်တယ်